I-China i-50ml i-75% ye-Alcohol Disinfectant TECH-BIO mveliso kunye nabenzi Zhongrong
Phantsi kwempembelelo ye-covid-19, i-75% ye-alcohol disinfectant iba yimfuneko yokhathalelo lobuqu kubomi bethu bemihla ngemihla ngakumbi kwezinye iindawo zikawonke-wonke ezinje ngesikolo, isibhedlele, ivenkile enkulu, ihotele, njl. iintsholongwane ukukhusela impilo yethu ngokufanelekileyo. Ipakethe ye-50ml iyaphatheka kakhulu, ungayifaka kwibhegi yakho okanye ibhegi xa uhamba, kwaye uyisebenzise nanini na, naphi na. Njengoko sivelisa utywala obukrwada, ixabiso lethu liya kuba kukhuphiswano kwaye nomgangatho ophezulu. Ngapha koko, sidlule i-CE, i-FDA, kunye ne-ISO yokuqinisekisa. Sisungule uphawuI-TECH-BIO ukuyenza njengeNombolo 1 yohlobo lweemveliso ze-disinfection e-China njengoko sinemigangatho ephezulu yobutywala e-China. Siyinkokeli e-China kwitekhnoloji ye-ethanol. Sine-500,000 yendawo yokusebenzela yemitha kwiphondo laseHebei, China. Inkampani yethu yasekwa ngo-1999. Nangona kunjalo, sinako ukwamkela OEM & ODM kuzo zonke iintlobo yeentsholongwane utywala. Ukujonge phambili ekubeni liqabane lakho lehlabathi kwaye uzalisekise imeko yokuphumelela!
Umthamo womnatha: 50mL
Uyilo lwepakethi oluchanekileyo lokuhamba xa usiya ngaphandle. Kwaye kulula kakhulu ukucofa intloko yempompo, inokusebenza kwizinto ezininzi ngakumbi kwiselfowuni, ilaptop, njl njl. Isitshizi sinokuhamba ngemizuzwana emi-3 emoyeni, akukho sidingo sokukhathazeka kakhulu malunga nokutsha, kodwa gcina kude nomlilo okanye ikhitshi.
Egqithileyo Iipesenti ezingama-75 zotywala ezibulala iintsholongwane kwi-IBC / Drum
Okulandelayo: Isicoci ngesandla se-OEM